एक वर्षअघिको घटना अहिले सम्झँदा उनलाई जिरिंग हुन्छ!!के भएको थियो त ? – News Nepali Dainik
एक वर्षअघिको घटना अहिले सम्झँदा उनलाई जिरिंग हुन्छ!!के भएको थियो त ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण १८, २०७७ समय: ६:३०:५६
तिनचुलीस्थित घरमा सुतिरहेका जापानी नागरिक तेञ्जिङ सिमिजु राति २ बजे भाडाकुँडा बजेको सुनेर ब्युँझिए । दर्के पानी परिरहेका वेला रातमा आवाज सुनेर उठेका उनी अज्ञात समूहको आ-क्रमणमा परिहाले ।
कसैले पछाडिबाट टाउकोमा हा-ने, उनी अर्धबे-होसी अवस्थामा पुगे । एक वर्षअघिको घटना अहिले सम्झँदा उनलाई जिरिंग हुन्छ भन्छन्।
उनले देखे, ‘श्रीमतीको हात डोरीले बाँ-धिएको थियो, दुई छोराको घाँटीमा कर्द थियो ।’
उनले आ-क्रमणकारीसामू हात जोडे, जीवनको भिख मागे । आ-क्रम-णकारीले ‘पुलिस हो’ भने । तर प्रहरी खुकुरी लिएर मध्यरातमा नागरिकको घरमा छिर्ने कुरै थिएन । उनले ‘गल्ती भयो होला, म त भर्खर जापानबाट आएको’ भन्दै जवाफ फर्काए । त्यसपछि अल्मलिएको जस्तो देखिएका आ-क्रमणकारीले मोबाइलबाट उनको तस्वीर खिचे । पासपोर्ट मागे र कसैलाई त्यसको फोटो पठाए ।
सायद योजनकारले सही घरमा प्रवेश गरेको संकेत दिएर होला, आ-क्रमणकारी जंगिए, ‘समन्वय गर्नु नत्र मा-र्दिन्छु ।’ सिमिजुले जवाफ फर्काए, ‘के चाहिन्छ लानु तर, परिवारलाई केही नगर्नू ।’ श्रीमती मुजुमी र छोराहरु १२ वर्षीय नुर्बु र ११ वर्षीय झिग्मी अगाडि नै ब-न्धक भइसकेकाले त्यसो भन्नुको विकल्प उनीसँग थिएन ।
सिमिजुका अनुसार त्यसपछि खुकुरी बोकेको समूहका व्यक्तिहरुले प्रहरीले झैँ घरको खनतलासी गरे । खाटहरु पल्टाए, दराज खोल्न लगाए, नगद र गरगहना के–के छ, सबै निकाल्न लगाए । आ-क्रमणकारी समूहका एक सदस्यले सोधे, ‘सी माला कहाँ छ ?’
सिमिजुका अनुसार उनले पहिल्यैदेखि बहुमुल्य सी मालाको तीन वटा दाना घरमा राखेका थिए, त्यही सूचना पाएर लुटेर समूह घरमा प्रवेश गरेको हुनसक्छ । उनीहरुले सी मालासँगै नगद ६ लाख रुपैयाँ, युरो डलर ७ सय, हङकङ डलर २ हजार, जापानी ऐन ८० हजारसहित सुनचाँदीका गरगहना र मोबाइल लगे ।
निस्किने वेला सिमिजु पुनः आ-क्रमणमा परे, ज्यान जोगाउन कोठाबाटै हा-मफाल्दा भुइँतलामा बजारिए र गम्भीर घा-इते भए ।
भोलिपल्ट महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धमा खबर गरे । प्रहरीले अनुसन्धान थाल्दा उनी ग्रण्डी अस्पतालमा भर्ना भइसकेका थिए । प्रहरीले अस्पताल पुगेर सोधपुछ नगरेको पनि होइन । तर घटनाबारे कति बताउन सके, उनलाई याद छैन ।
त्यसवेला बौद्ध प्रहरीले तयार पारेको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सी माला लुटिएको प्रसंग छैन । सिमिजुका अनुसार मालाको मूल्य अहिले तीनदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ र यही मालाको कारण उनको घरमा लुटपाट भएको हो ।
तत्कालीन बौद्ध प्रहरीका डीएसपी नरेन्द्र चन्द अहिले काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुको मु-द्दा शाखामा छन् । उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान अझै जारी छ ।’
चन्दका अनुसार त्यसवेलै घटनामा संलग्न सोनाम तामाङ, दोर्जे तामाङ, दिनेश कार्की, एकराज तामाङ, आङ्निमा शेर्पा, इन्द्रजित तामाङ र कृष्णबहादुर स्याङताङ पक्राउ परेका थिए । मुख्य योजनाकार मानिएकी युवतीलाई भने प्रहरीले हालै भारतको दिल्लीस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको छ । यद्यपि, प्रहरीले औपचारिकरुपमा उनलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट समातिएको भनेको छ ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख अशोक सिंहका अनुसार ३२ वर्षीया जीना लामा पक्राउ परेकी छिन् । बौद्धमा बस्दै आएकी उनीमाथि डाँ-का, शरीर ब-न्धक तथा ज्या-न मा-र्ने उद्योगमा विस्तृत अनुसन्धान गरिएको सिंह बताउँछन् ।
एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उनी भारतीय प्रहरीको समेत हत्तपत्त नजर नपर्ने इलाकामा गएर लुकेकी थिइन् । मजनुका तिला भनिने ठाउँमा उनी देखिएपछि प्रहरीको टोली त्यहाँ गएको थियो । ‘त्यो क्षेत्र विभिन्न मुलुकका फरार अपरा-धी आएर लुक्ने अखडा रहेछ’, स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय प्रहरीकै लामो निगरानी त्यसपछि हामीसमेत गएर पक्राउ गरेका हौं ।’
स्रोतकाअनुसार पक्राउ पर्नुअघि उनी एक घरभित्र महिलाहरुसँग क्यारेमबोर्ड खेल्दै गरेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनसँगै प्रहरीले श्रीमानलाई पनि समातेर काठमाडौं ल्याएको थियो । यद्यपि, प्रकरणमा संलग्नता नदेखिएपछि छुटेका छन् ।
जिनालाई सोमबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको डीएसपी चन्द बताउँछन् । हाल उनी केन्द्रीय कारागार, सुन्धारामा छिन् ।
उनलाई भा-ग्न सहयोग गरेको अभियोगमा काभ्रेका रामसिंह तामाङ भनिने बिसुर सिंह लामा तामाङ अभ-द्र व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा मु-द्दा खेपिरहेका छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार चोरी गरेको सामान राख्ने दुई वटा झोलासमेत जिना लामाले नै खरिद गरेको खुलेको छ । त्यसैले पनि घटनाको मुख्य योजनाकार उनी भएको प्रहरी बताउँछ । पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तले पनि उनकै निर्देशन बमोजिम लु-टपाट गरिएको बताएका छन् ।
बयानका क्रममा लामाले आफू चोरी हुँदा केही पर बसेर हरेक जानकारी लिइरहेको स्वीकारेकी छन् । र, प्रहरीले भने उनको मात्रै योजनामा घटना भएको नहुन पनि सक्ने निष्कर्षसहित जापानी नागरिकबारे लामालाई समेत सूचना दिने व्यक्तिबारे खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार सुरुमा मिङमार तामाङ र विष्णु बाइबाले घरको पछाडिको च्यानल गेटको तला रडले फोडेर घरभित्र पसेका थिए । त्यसपछि सोनाम, एकराजसहित ६ जना घरभित्र छिरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।
प्रहरीका अनुसार लु-टपा-ट भइरहँदा आङनिमा शेर्पा भन्ने व्यक्तिले मोटरसाइकलमा वरिपरि घुमेर रेकी गरेका थिए । उनी बौद्धमा रहेको एक कफी पसलका सञ्चालक हुन् ।
जिना र प्रदीप लामाले दुई वटा ट्याक्सी रिजर्भ गरेर भा-ग्नलाई तयारी अवस्थामा राखेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ भने चोरीको सामान लिएर कोटेश्वरतिर गएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
अधिकृतहरुका अनुसार घटनाका केही आ-रोपी अझै फ-रार छन् । प्रहरीले सोनाम शेर्पा, पेम्बा शेर्पा लगायतको खोजी जारी राखिएको जनाएको छ । गौरव पोखरेल/अनलाइनखबर
Last Updated on: March 2nd, 2021 at 6:30 am